Fomba fitafiana ao Jordania | Vaovao momba ny dia
Ahoana no fiakanjo any Jordania
Mariela Carril | | soso-kevitra, Jordania
Nanapa-kevitra ianao mandeha any Jordania rehefa miverina ara-dalàna ny toe-pahasalamana. Mamaky momba ny toeran'ireo mpizahatany ianao, sakafo, visa, fitaterana sy maro hafa, saingy tsapanao fa miresaka daholo ny rehetra ahoana no tokony hataon'ny vehivavy ao amin'io firenena io dia tsapanao avy eo fa vehivavy ianao.
Vehivavy ao anaty firenena islamika tsy mora izany. Tahaka ny any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao ny vehivavy mpandeha dia mitantana ny tenany amin'ny fahalalahana sy ny fikarakarana, eto kosa ny toe-javatra dia mihodina indray satria firenena mpivavaka be io. Andao hojerentsika anio ary ny fomba fitafiana ao Jordania.
Jordania sy ny kolontsainy
I Jordania dia firenena manana harena ara-tantara ka mpandeha maro no mahita fa mahaliana. eFA seranam-piaramanidina iraisam-pirenena roa, ny iray any Amman, renivohitra nasionaly, ny iray hafa eo amoron'ny Ranomasina Mena, ao Aqaba, mba hahafahanao misafidy ny toerana hidirana na hidiranao amin'ny iray, hiampitana ny firenena, ary hivoahana amin'ilay iray hafa.
Raha ny hanombohanao tsara ny renivohitra no safidinao, satria mifantoka amin'ny tranombakoka tsara sy manan-danja ary toerana manan-danja izany. Afaka manao fitsidihana tanàna ianao ary avy eo mandahatra fitsangatsanganana antoandro. Ohatra, avy any Amman afaka mandeha any amin'ny rava ianao nafindra, iray amin'ireo tanàna tranainy indrindra any Moyen Orient misy mozika mozika tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX. Afaka manohy ny dianao mankany ianao Mount nebo handinika ny tantara sy ny Baiboly Lohasahan'i Jordania ary miafara amin'ny Ranomasina Maty maka rendrika tsy fahita firy sy mitsingevana.
Ity faritra avaratry ny firenena misy an'i Amman ity dia manana tany manankarena sy mahavokatra ary harena Silamo toy ny Castle an'i Ajlon na ny tanànan'ny Gerasa. Rehefa nahita izany rehetra izany ianao dia afaka mianatsimo mankany amin'ny efitra, ny Lohasaha maina an'i Wadi Mujib, Kerak sy ny tranoben'i Cruzados, Petra ary ny lohasaha izay ahafahanao mitaingina rameva, ireo tendrombohitra, mandehandeha mamaky ny efitr'i Wadi Rum anaty jeep 4 × 4, ny Lohasahan'ny volana mahita ny kolontsaina Bedouin mandra-pahatongany any Aqaba sy ireo hatsaran-tarehiny anaty rano. Sahy milentika ve ianao?
Fa ny marina dia rehefa manao izany rehetra izany ianao, ary Raha vehivavy ianao dia tsy maintsy mitandrina rehefa miakanjo. Jordania dia a firenena tena mpandala ny nentin-drazana ka mandalo ny fenitra sarona fonony sy volo raha tovovavy ianao. Tsy hita any amin'ny farany mpandala ny nentin-drazana izy, mahita zazavavy manao jeans ianao na kiraro fanatanjahan-tena nefa tsy dia be loatra. Ka ny tsara indrindra dia tsy manintona ny saina ary aza manangona akanjo fohy, hozatra na akanjo fohy. Tsy misy zavatra mampiseho hoditra loatra.
Tsy mila manafina ny tenanao toy ny jiro taloha ianao, fa makà vitsivitsy sarondoha lehibe hanaronana ny lohanaoRehefa dinihina tokoa, ianao dia Tandrefana ary tsy misy antenaina aminao afa-tsy ny fanajana. Raha volo no resahina, dia azonao atao aza ny mandingana ny lamba firakotra any amin'ireo tanàna, fa tadidio izany aza miala amin'ny hotely na hotely misy volo lenaAzafady mba maina tsara aloha, satria ny volo mando dia heverina ho firaisana.
Mikasika ny akanjo amin'ny ankapobeny, alaim-panahy hanao akanjo maivana ny olona ary hanararaotra izany ary haka masoandro na hivoaka mangatsiaka kokoa. Tsy izany no izy eto, farafaharatsiny raha mamakivaky tanàna, tranombakoka na toerana manan-tantara ianao. Ao anaty toeram-pialofana dia afaka mandeha anaty kilaoty fohy ianao, fa raha mandehandeha eny ambanivohitra ianao, eny fa na dia i Amman aza dia tsy te-ho tsy manaja ianao vao mahazo aina.
Misy teny roa tokony hodinihin'ny vehivavy any amin'ny firenena Silamo: fanajana ny kolontsaina sy ny fahendrena. Na aiza na aiza alehanao dia ataovy izay hitanao, hoy ny fitenenana, ary eto dia mihatra tanteraka. Tokony ho fantatrao fa tsy mitovy izao tontolo izao, misy kolontsaina samihafa ary na dia tsy mizara azy ireo aza isika dia tokony hanaja azy ireo. Ny zavatra hafa dia ny fahendrena. Aza manintona ny saina. Tsy ho tianao ny ho ivon'ny fijery maloto avy amin'ny lehilahy ary manameloka ny mason'ny vehivavy.
Raha mikasa ny ho any amoron-dranomasina ianao dia afaka mandeha miaraka Swimwear. Betsaka ny trano fandraisam-bahiny any amin'ny faritry ny Ranomasina Maty ary ho hitanao ny zavatra rehetra, manomboka amin'ny vehivavy manao akanjo burquini, jumpsuits, hatrany amin'ny bikinis. Ny mandeha na ao anaty ranomasina na sunbathe dia tsara daholo, fa tsy mila mandeha mamaky ny arabe na ny hotely miakanjo toy izany ianao. Misisika aho fa tsy ho tianao ny tarehin-javatra izay hahatonga anao ho indray mipy maso.
Ary ahoana ny amin'ny kiraro? Ho an'ny faritra an-tanàn-dehibe kapa na kiraro maivana Tena tsara izy ireo fa raha mankany an'efitra na Petra ianao dia afaka mandray kiraro mandeha na zavatra miaraka amina tokana misimisy kokoa. Raha miresaka momba ny faritra an-tanàn-dehibe sy ambanivohitra ianao dia afaka manambatra ny valizinao na ny kitapom-bolanao mieritreritra ireo faritra roa ireo sy ny akanjo mifanaraka aminy: ho an'ny tanàna, pataloha landy malalaka, T-shirt malalaka, kapa vita amin'ny hoditra misy tokana, kitapo antonony hametrahana ireo zavatra mividy ianao, ary ho an'ny ambanivohitra dia manova kiraro ianao ary manampy satroka.
Famaranana ny lahatsoratra anio momba ny fomba fiakanjo any Jordania raha vehivavy ianao dia tsy maintsy rtadidio ny manarona ireo faritra amin'ny vatana ireo: tratra, soroka, vavony ary tongony. Ny tanana lava dia mety ho zava-dehibe raha miditra amin'ny moske na tranokala ara-pivavahana ianao, fa ampy ny manarona ny soroka amin'ny toerana hafa. Manarona volo eo ambanin'ny hijab na burqas ny lohanao vehivavy Jordanianina, saingy mpizahatany ianao ary tsy mety aminao izany fangatahana izany. Any amin'ny toerana ara-pivavahana dia matetika no manolotra zavatra anao izy ireo raha tsy manana ianao.
Maoderina kokoa noho i Egypte i Jordania raha resaka fitafiana no jerena, nefa diniho fa raha mandroso fitsidihana voalamina ianao dia mora kokoa noho ny manapa-kevitra ny hifindra irery. Ny tsy tokony hohadinoinao, ho fanampiny, dia ny masoandro, solomaso, satroka ahazoana aina, menaka manitra aorian'ny masoandro. Ary mazava ho azy, ny te hiala voly nefa izany, aorian'ity areti-mandringana ity izay namatotra antsika rehetra tao an-trano dia azo antoka kokoa. Ary amin'ny triplicate!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » soso-kevitra » Ahoana no fiakanjo any Jordania
Lagoon mainty any Urbión